राष्ट्र Archives - खबरदार न्युज
Sep192021 by AdministerNo Comments
३ असोज, काठमाडौं । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान संघीयता सहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ । दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ । समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अंगका प्रमुखलगायत सहभागी छन् । टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा विभिन्न साँस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्नुका साथै शान्तिको प्रतीक सेतो परेवा उडाइएको थियो । संविधान दिवस सरकारले असोज दुई गतेदेखि चार गतेसम्म तीन दिने कार्यक्रम गरेर
Aug32021 by AdministerNo Comments
हे भगवान एक्कासी के भयो पत्रकार अपिल त्रिपाठीलाइ? बिन्ती सक्दो सेयर गर्नुहोला।
Posted in Breaking News, राष्ट्र, समाचार
काठमाडौ, चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रमका सञ्चालक अपिल त्रिपाठिको स्वास्थ्यमा एक्कासी समस्या आएपछी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। हिजो मात्र एउटा अपरेसन गरेका त्रिपाठिको स्वास्थ्य अहिले सुधारन्मुख भएको परिवार श्रोतले जनाएको छ। मङ्गलबार दिउँसो उनको फेसबुक बाट एउटा फोटो सहितको जानकारी पोष्ट गरेपछी उनी बिरामी भएको कुरा थाहा भएको हो। उनको फेसबुकबाट गरिएको पोष्टको अन्त्यमा भनिएको छ: ''जानकारीको लागी अपिलको परिवार बाट पोष्ट गरिएको'' यसको मतलब उनी आफै फोन चलाउन सक्ने अवस्थामा भने छैनन। उनको अहिले जि एम सि हस्पिटलम उपचार भइरहेको छ। प्रथाना गरौँ अपिल त्रिपाठीलाइ छिटै सन्चो होस अनि आफ्नो पुरानै काममा फर्किएको देख्न पाइयोस। उनको फेसबुकमा परिवारले गरेको पोष्ट जस्ताको त्यस्तै: एक्कासी स्वास्थ्यमा समस्या आएपछी GMC अस्पताल भर्ना गरिएको छ | हिजो एउटा अपरेशन समेत गरिएको छ | स्वास्थ्यमा सुधार आउने क्रम
Aug22021 by AdministerNo Comments
काठमाडौ, सरकारले को'रोना सं'क्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बन्द रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल खुलाउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले साउन अन्तिम सातादेखि लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा खुलाउने तयारी गरेको हो । विभागले आगामी आइतबार मातहतका कार्यालयसँग छलफल गरेर ट्रायल परीक्षा खुलाउन लागेको हो । विभागले यसअघि नै लाइसेन्सको ट्रायल खुलाउने तयारी गरेकोमा को'रो'ना सं'क्र'मण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा नहटेको भन्दै यातायात कार्यालयले ट्रायल खुलाउन नसकिने बताएका थिए । पछिल्लोपटक विद्यालय, विश्वविद्यालयलगायतका परीक्षा धमाधम सुरु भएपछि विभागले पनि ट्रायल खुलाउने तयारी गरेको हो । विभिन्न खाले सवारी साधान चलाउनका लागि अनलाइन आवेदन दिएर लाखौं सेवाग्राही ट्रायल परीक्षाको प्रतीक्षामा बसेका छन् । गत वर्ष लकडाउनपछि सरकारले अनलाइन प्रणालीमा आवेदन खुल
Aug12021 by AdministerNo Comments
दार्चुला , कल्याणसिंह धामीले मालघाटमा यात्रु कुर्न थालेको २१ वर्ष भयो, उनको रोजीरोटी नै यही हो । सरकारले न पुल बनाएको छ, न सडक । त्यसैले आफ्नै सदरमुकाम जान पनि महाकाली तरेर पारि जानेका लागि कल्याणसिंह जस्ता स्थानीयले आफ्नै लगानीमा तुइन बनाएका हुन्छन् । हिउँदमा ५० र बर्खामा सय रुपैयाँ लिएर उनीहरू मान्छे पारि पठाउँछन् । शुक्रबार बिहान उनी मालघाट पुग्दा नपुग्दै यात्रुको लाइन लागिसकेको थियो । ८ बजेसम्म त उनले चार जनालाई पारि तारिसकेका थिए । लगत्तै स्थानीय जयसिंह धामी, विक्रम रङ्कली किनारमा पुगे । उनीहरू सदरमुकाम पुगेर बस चढी काठमाडौं र त्यहाँबाट विदेश जाने यात्रामा थिए । स्थानीय अनिता धामी पनि उनीहरूसँगै राजधानीसम्मको यात्रामा थिइन् । महाकाली तर्न जयसिंह तुइनमा झु'न्डिए । त्यही बेला कल्याणसिंह झसंग भए । यताबाट जयसिंह तुइनमा सर्कंदै थिए, उता भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का
Jul302021 by AdministerNo Comments
काठमाडौ, पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरीमाथि अ’भ’द्र व्य’व’हा’र गरेका छन्। शुक्रबार साँझ महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा शाहले प्रहरीलाई यस्तो गरेका हुन्। हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकलमा सवार शाहलाई प्रहरीले समातेको थियो। पारसले त्यसक्रममा प्रहरीलाई ध’म्की’पूर्ण शैलीमा छोड्न भनिरहेको सार्वजनिक भएको भिडिओमा सुन्न सकिन्छ। शुक्रबार साँझ काठमाडौंको महाराजगञ्ज चोकमा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीसँग उनी वा’दवि’वादमा उत्रिएका थिए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा स्रोतका अनुसार हेल्मेट प्रयोग नगरी केही व्यक्तिले मोटरसाइकल चलाइरहेको देखेपछि ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले उनीहरुलाई रोकेका थिए। हेल्मेट नलगाइ मोटरसाइकल चलाउनेमध्येका धेरैले प्रहरीसँग गल्ती स्वीकार गरेपनि पारस शाह भने उल्टै वा’दवि’वादमा उत्रिएका ट्राफिक महाशाखाका एक प्रहरीको भनाइ छ। पूर्व युवराज पारसले प्रहरीसँग झ’गडा गरिरहेक
Jun292021 by AdministerNo Comments
महेश जैसी। तुर्माखाँद अछाम, नेपाल सरकार,फिनल्यान्ड सरकार र तुर्माखाँद गाउँपालिका को आर्थिक सहयोगमा संचालित ग्रामीण जलस्रोत ब्यावस्थापन परियोजना (RVWRMP) तथा सहयोगी संस्था रुडेक नेपालको सहजीकरण रहेको अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका वार्ड नं. ३ अन्तर्गत संचालित सेलगाडी-लकान्द्र सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ले लकान्द्र बासिको बर्षौँ देखिको सपना पूरा गरिदिएको छ। ८६२ मिटर तलको मुहानबाट सोलार लिफ्टको प्रयोग गरि पानी गाउँको टुप्पोमा ल्याइएको छ। बस्तिको माथि २० हजार लिटरका तिन वटा ट्याङ्की बनाइएको छ। त्यही ६० हजार लिटर सोलार लिफ्ट बाट ल्याइएको पानि र ९ वटा मुहानमै बनाइएको ट्याङ्की को पानीले अहिले गाउँमा पानीको अभाव हुन दिएको छैन। उक्त पानी अहिले गाउँका ६१ व्याक्तिगत धारा (१ घर १ धारा) र २७ वटा सामुहिक धारामा बगिरहेको छ। सेलगाडी को पानि गाउँमा नपुग्दा सम्म लकान्द्र गाउँका करिव १२० घर धु
Jun252021 by AdministerNo Comments
काठमाडौ, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-५, शिख स्वभिताका ज्ञान बहादुर पुनको घर मुनीको जमिन धाँजा फाटेर चिराचिरा परेको छ। भिरालो पाखोमा अवस्थित पुनको घरको आगन नै चर्किएपछि घर बगाउने हो कि भन्ने डरले सुरक्षित ठाउँमा गए । स्वभिता र धस्केखरे गाउँमा माथिबाट र तलबाट दर्जनौ ठाउँमा जमिनमा धाँजा फाटेको छ । विपत्तीका कारण घर छोडेर हिडेका केही फर्किएपनि अधिकांस प्राविधिक पक्षको सुझावका आधारमा घरमा फर्किने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाई छ। ठूलो पानी पर्दा कुनैपनि बेला मानवीय क्षती हुने अवस्था देखिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा राहत वितरण गरी जोखिममा रहेका १९ घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरियो ।गएको असार १ गतेदेखि लगातार भइरहेको अविरल वर्षातका कारण मालिका गाउँपालिका-२, बेली र खवाङ गाउँका बासिन्दा विस्थापित छन् । दुबै गाउँबाट करिब ३० घरपरिवारले बासस्थान छोडेर आफन्त,छिमेकी र सार्वजनिकस्थलमा आश्रय ल
Jun242021 by AdministerNo Comments
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरहादुर देउवाले अब आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने बताएका छन् । भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट शनिबार सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरुसँगको कुराकानीमा उक्त कुरा बताएका हुन् । देउवाको भनाई तात्पर्य उनी पुनः सभापतिमा दोहोरिने चाहेका छन् । र, त्यहीँ छलफल गर्न देउवाले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । देउवाले शनिबार प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यहरुसँग बूढानीलकण्ठमा छलफल गर्दै आफू सभापतिमा दोहोरिने बताए । उनले भने, ‘भनेकै समयमा महाधिवेशन हुन्छ । म सभापतिमा फेरि लड्छु । र, मेरै नेतृत्वमा कांग्रेसलाई देशको ठूलो पार्टी बनाउछु ।’ शनिबार छलफलमा सहमहामन्त्री सुनिल थापा, केन्द्रीय सदस्यहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीन विश्वकर्मा, सीता गुरुङ उपस्थित थिए ।
Jun232021 by AdministerNo Comments
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आ'क्रोश व्यक्त गर्दै सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा दु ख दिने गरेको आ'रोप लगाएका छन् । अब अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्न सक्ने पनि प्रधानमन्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् मंगलबार २० जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतप्रति आ'क्रो'शित बनेका हुन् । ​मंगलबार राति बालुवाटारमा पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानअनुसार २५ जनाको मन्त्रिपरिषद हुँदा त काम गर्न हम्मे परिरहेको थियो, अब चारजना मन्त्रीले कसरी सरकार चलाउनु ?’ आफूले मधेसका नेताहरुलाई समेटेर संविधानअनुसार नै सरकार विस्तार गर्दा अदालतले रोक लगाइदिएको ओलीले गुनासो गरे । उनले पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई भने, ‘अब अदालतको आदेश मान्दिनँ पनि कसरी भन्नु ? तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्